50 si qaabeysan loo qaabeeyey | Abuurista khadka tooska ah
50 sawir-gacmeed si fiican loo qaabeeyey
Carlos Sanchez | | General, Khayraadka
Ma sahlana in la caddeeyo waxa sawir-gacmeedku yahay sax, laakiin aan aragno haddii aan wax ka yara caddeyn karno:
La sawir qaadayaasha waa matalaad muuqaal ah oo ka badan qoraalka laftiisa, kaas oo sharaxaada, qisooyinka ama tarjumaada ay soo faragalinayaan, oo lagu soo bandhigayo qaab muuqaal ahaan qaab jaantus ah, taas oo laga yaabo ama aan la jaan qaadi karin sawirada iyo / ama dhawaaqyada muuqda Infographics-ku wuxuu u dhashay sidii loo gudbin lahaa macluumaadka si garaaf ahaan ah. Khariidado, jaantusyo, rasaas, iwm. Iyagu waa infogram, taas oo ah, cutubyo yar-yar oo sawir-gacmeedyo ah, oo lagu soo bandhigo macluumaad dhammaystiran, in kasta oo ay noqon karaan kuwo dhammaystiran ama isku-dhafan.
Ereyga sidoo kale wuxuu noqday mid caan ah oo loola jeedo dhammaan kuwaas kombiyuutarada la soo saaray. Si gaar ah si gaar ah, badanaa waxay loola jeedaa abuurista sawirro isku dayaya inay ku daydaan adduunka saddexda geesood ah iyaga oo xisaabinaya dabeecadda iftiinka, mugga, jawiga, hooska, qaabdhismeedka, kamaradda, dhaqdhaqaaqa, iwm.
Marka qoraalkaan la fahmo, waxaan u maleynayaa inuu sifiican u cadahay, oo markaan aragnay dhamaan macluumaadka ay raggu ka yimaadeen HongKiat boodka ka dib waxaan u malaynayaa sidoo kale. Aad u weyn
50 Sano oo Sahaminta Hawada ah. Infograph weyn oo muujinaya 50-kii sano ee ugu dambeysay sahaminta booska. Sawir gacmeedkan cajiibka ah waxaa sameeyay Sean McNaughton iyo Samuel Velasco oo loogu talagalay National Geographic. (iyada oo loo marayo Sean McNaughton iyo Samuel Velasco)
Disney vs. Marvel. Hawsha isku duubnaanta ee ay samaysay Curseofthemoon. An infographic ku saabsan Disney iibsashada Marvel. (habaarka Dayaxa)
Masjidka weyn. Kani waa war-saxaafadeed infographic ah oo ka yimid Gulf News (Dubai). waxay la timid sawirka dhabta ah iyo sharaxaad ku saabsan qaab dhismeedka masjidka weyn. (iyada oo loo marayo Douglas Okasaki)
Sare u kac. Ka mid ah 191-ka dal ee ay tirisay Qaramada Midoobay kaliya 81 (42%) inay yeeshaan dhisme ka sareeya 100 mitir. (iyada oo loo marayo Theo Deutinger, Johannes Pointl, Beatriz Ramo)
Ceelasha Relief & Kaydinta Subsea. Shirkadda BP waxay ku talo jirtaa inay qoddo laba ceel oo loogu talagalay in lagu kala gooyo ceelka asalka ah ee ka sarreeya kaydka saliidda. (iyada oo loo marayo Hollywoodbackstage)
Warbaahinta Bulshada ee Prism 2010. Muuqaalkan 'infographic' wuxuu soo bandhigayaa wada sheekaysiga khadka tooska ah ee u dhexeeya dadka bulshada ku badan iyo sidoo kale shabakadaha isku xidha Baraha Bulshada (iyada oo loo marayo Serge Esteves)
Hiddaha iyo Bulshada: Dharka. Macluumaadkan macluumaadka wuxuu kaa caawin karaa inaad barato inaad kala soocdo ubax cilmi baarista iyo midab taranka. (iyada oo loo marayo DNAPolicy)
Model Isticmaalaha Flickr. Bryce Glass waxay soo saartay jaantus qaabeysan oo adeegsade Flickr ah oo qofku si fudud u fahmi karo nidaamka Flickr. (iyada oo loo marayo Bryce Glass)
Shidaalka Gubanaaya: Gawaarida Celceliska vs. Celceliska Aadanaha. Isbarbardhig faafaahin ah oo ku saabsan sida baabuurtu u isticmaalaan gaaska si ay naftooda u awood u yeeshaan, sida dadku u isticmaalaan cuntada. (iyadoo la adeegsanayo Wanaagsan)
Xulo Hubkaaga: Ganacsiga Caalamiga ah. Kharajka milatariga adduunka ayaa hadda gaadhay hal tirilyan oo doolar. (iyada oo loo marayo Princeton)
Toosinta Danyar. Saameynta saliida ku daatay gacanka Mexico (iyada oo loo marayo Infographicworld)
Waqtiga Juquraafiyeed. Jaantus ku saabsan miisaanka waqtiga jir ahaaneed. (iyada oo loo marayo Ethan Hein)
Buugaagta La Bartilmaameedsaday Badankood. Sannad kasta, maktabadaha waxaa laga codsanayaa inay buugaagta ka saaraan khaanadahahooda, maxaa yeelay waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo aan habboonayn. Laakiin liistada 10-ka buug ee ugu dhibka badnaa 2009 waxay muujinayaan buugaagta waalidiinta qaar u arkeen wax diidmo ah, iyo sababta ay u dareemayaan in carruurtoodu aysan ahayn inay akhriyaan. (iyadoo la adeegsanayo Wanaagsan)
Cajaladda Casaanka ah: Dawladda ayaa shiiday. Celcelis ahaan mushaharka dowladda Mareykanka iyo jagooyinka la muujiyey (iyada oo loo marayo Princeton)
Macluumaadka Isticmaalayaasha Twitter. Noocyada kala duwan ee adeegsadayaasha twitter-ka (iyada oo loo marayo bandhigga Infographics)
Nabadeey, Lenin. Xogtan sifiican loo sameeyay waa ku guuleyste kaalinta 2-aad ee tartanka caalamiga ah ee Wargeysyada. (iyada oo loo marayo Lech Mazurczyk)
Diyaaradda Kulula. Shirkadda duulimaadka Afrika ee Kulula waxaa lagu sameeyay dib u habeyn guud oo diyaaradeed. Waxay sameeyeen hal sawir oo weyn oo ku saabsan bannaanka hawadooda. (iyada oo loo marayo Shanairpic)
CarLand: Qarnigii Gawaarida Gawaarida ee Ameerika. Taariikhda gawaarida Mareykanka. (via wanaagsan)
Dagaalkii caaga: Debit Vs Credit. Burbur u dhexeeya kaarka bangiga iyo kaarka deynta. (viaLoans iyo Amaah)
Dhismooyinka ugu dhaadheer. Waa kan muuqaalka dhismooyinka adduunka ugu dhaadheer. (iyada oo loo marayo Joelertola)
Ahraamta Budhcad Badeedda Internetka. MPAA waxay sharraxaad muuqaal ah ka bixisaa Ahraamta budhcad-badeedda internetka. (viaNIXON * HADA)
Digg Hore: Infographic vs non-Infographic. Soo gudbinta caanka ah ee loo yaqaan 'digg gudbinta' ee u isticmaasha infographicska ka soo horjeedka 'infographics'. (iyada oo loo marayo 10e20)
Websaydhyada Gaaban ee Soodejinaya ee Fortune 500. Faahfaahintaan ayaa faahfaahinaysa waqtiyada xamuulka ee dhammaan shirkadaha Fortune 500 (iyada oo loo marayo Heinley)
Cosmology Cibraaniga hore. Fikradda qadiimiga ah ee cibraaniga ah ee caalamka (iyada oo loo marayo Michæl Paukner)
Riyada Mareykanka. Sawir gacmeedkani wuxuu muujinayaa riyada dhabta ah ee Mareykanka (loo maro Spidercam)
Jadwal xilliyeedka internetka. Jadwal xilliyeedka websaydhada caanka ah (iyada oo loo marayo Wellington Gray)
Gantaal-Caddayn Obamamobile. Sawir gacmeed uu soo saaray John Lawson oo muujinaya sida adag ee Obama ee Cadillac One cusub. (iyada oo loo marayo John Lawson)
Xayawaanku waa la ogyahay: Qiimaha Cute. Aynu eegno qiimaha dhabta ah ee korinta (iyo koolkoolinta) xayawaankeena aan jecel nahay. (iyada oo loo marayo Mint)
D-Day. Muuqaal faahfaahsan oo ku saabsan waxa ka dhacaya D-Day (iyada oo loo marayo Metrobest)
Qiimaha Lahaanshaha. Qiyaasta qiyaasta dhismaha guri. (iyada oo loo marayo Daanyeer Dijital ah)
Koorsooyinka Pikes Peak. Sawir qurux badan oo loogu talagalay Pikes Peak International Hill Climb (iyada oo loo marayo Davvi Chrzastek)
Ma jiri doono Kalluun Bad ku Jira. Tilmaamahan 'infographic' wuxuu muujinayaa ciribtirka nolosha badaha inay ka dhalan doonto kala duwanaansho la'aanta ku timaadda deegaanka badda ee ka imanaya kalluumeysiga noocyada gaarka ah ee kalluunka. (iyadoo la adeegsanayo Wanaagsan)
Su'aalaha Waaweyn ee Isbadalka Cimilada. Saameynta dhabta ah ee isbedelka cimilada (adoo adeegsanaya Adolfo Arranz)
Caymiska Jirka Caanka. Liistada qaar caan ah oo caan ah iyo qeybta jirka ee ay caymiska kujireen (iyada oo loo marayo Blog Infographics)
Madh Badh Muraayad: Dagaallada Biyaha ee Imaanaya. Infographic-kaani wuxuu sharxayaa sababta aan ugu baahanahay inaan hadda biyaha kaydinno. (iyada oo loo marayo Princeton)
Jadwalka Labada Bilood. Sawirka iyo Naqshadeynta Fernández Tifaftirayaasha (iyada oo loo marayo Icarograf)
Beerta Mustaqbalka. aragti xeel dheer oo ku saabsan beerashada shirkadaha (adoo adeegsanaya qoraal)
Dilka Puerto Hurraco. Infographic loo sameeyay Isbaanishka Dimuqraadiyadda (iyada oo loo marayo Julian Develascot)
Halkani waa halka aan ku noolahay. Bal u fiirso Ameerika lambarrada leh sawir-gacmeedkan is-dhexgalka ah. (via Waqtiga)
Khariidadda Mareykanka. Muuqaalka khariidada Mareykanka (iyada oo loo marayo MakemyMood)
Lix xilli oo ABC 'lumay' - Tirooyinka. Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan taxanaha telefishanka tooska ah ee tooska ah ee Mareykanka. (iyada oo loo marayo MediaFreakBlog)
Ahraamta Nidaamka Hanti-wadaagga. Hanti-wadaaga ayaa sharraxaad ka bixiyay muuqaalkan fudud ee muuqaalka leh. (iyada oo loo marayo NEDELJKOVICH, BRASHICH iyo KUMARICH)
Jadwalka Leegada LEGO: 50 Sano oo Dhismo Xamaasad leh. LEGO, illaa sanadaha (iyada oo loo marayo Jesus Diaz)
Dad iyo Duunyo. Muuqaalkan xiisaha leh wuxuu muujinayaa in sifooyinka aadanaha qaarkood laga helo xayawaanka. (iyada oo loo marayo Metrobest)
Ereyada. Liis alifbeeto ah oo ka mid ah ereyada ugu badan ee ku soo noqnoqda buug, marka laga reebo ereyada caadiga ah sida "ee" iyo "it". (iyada oo loo marayo Amun Levy)
Maxay Jidadka Waaweyni u Joogaan. Faahfaahintan qabow waxay bixisaa 4 sababood oo ah sababta waddooyinka waaweyn ay u yimaadaan inay joojiyaan. (iyada oo loo marayo bandhigga Infographics)
Panda weyn. Aasaasiyadeed hal abuur leh oo muujinaya sawirka panda iyada oo loo marayo qaab qoraal ahaan. (iyada oo loo marayo Lish-55)
Koobab sawiro ah. Taxane joornaal gaar ah oo loogu talagalay xiddigaha tagaya Koobka Adduunka. (iyada oo loo marayo Renata Steffen)
Transit 3 finalka. Macluumaad ku saabsan waxa sababa shilalka badan ee taraafikada (iyada oo loo marayo Gerson Mora)
Sheekada (illaa hadda) ee Twitter. Kordhinta iyo kororka Twitter (iyada oo loo marayo Infoshot)
Wareejinta Ugu Weyn. Haddii loo maleeyo in tirakoobyadani ay macquul yihiin, waxay muujineysaa muhiimadda iyo baaxadda warbaahinta bulshada. (iyada oo loo marayo Derri Hasmi)
Ka soo degitaanka Deynta Kaarka Amaahda. Mint.com waxay leedahay qosol, laakiin waxbarasho, infographic ku saabsan sida ugu fudud ee ay tahay in lagu dhibaateeyo deynta kaarka deynta. (iyada oo loo marayo Mint)
Akhri wax dheeraad ah: 50 Macluumaad Xeel-dheer oo Si Fiican Loogu Habeeyey | Waxyi http://www.hongkiat.com/blog/50-informative-and-well-designed-infographics/#ixzz0pRoediHn
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 50 sawir-gacmeed si fiican loo qaabeeyey
Midka hanti-goosadku waa weyn yahay
Ku jawaab varken
Aad u xiiso badan, sida muuqata tusaale weyn noo ah iyo inaan la shaqeyn karno ardaydeena, mahadsanid, ok.
Ku jawaab Marleny
aad u xiiso badan.
Faahfaahin dheeri ah. Waxaan marwalba ku fakaraa inaad yeelato hibo gaar ah oo aad ku noqon karto saxafiga ama tafatiraha tafatiraha. Ma sahlana in lagu soo koobo xog intaa le’eg meel yar oo ka dhigaysa mid la fahmi karo isla mar ahaantaana loogu raaxeysto akhristaha.
Waxay xadidaysaa tirada sanduuqyada wax lagu hubin karo
20 ka mid ah mawduucyada Ecommerce ugu wanaagsan ee loogu talagalay Wordpress